ကျတော် နဲ့ လောကနန္ဒာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ကျတော် နဲ့ လောကနန္ဒာ	10
ကျတော် နဲ့ လောကနန္ဒာ
Posted by အောင် မိုးသူ on Dec 23, 2015 in My Dear Diary | 10 comments
ဒီတစ်ခေါက် ပုဂံသွားတာ အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ နှံ့နှံ့စပ်စပ်မရောက်ခဲ့ပြန်ဘူး။
အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း ဘုရားဖူးကားနဲ့မို့ ရောက်ပြန်တွေချည်းပါပဲ။
ပုဂံမှာ ခြောက်ရက်ကြာတယ် ငါးရက်ကတော့ မြင်းပြိုင်ပွဲကွင်းအလယ်မှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။
တစ်ရက်တော့ ရှိတဲ့အချိန်လေး E Bike စီးပြီးလည်တော့။ E Bike ဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာ
သွားလို့ တော်တော်အဆင်ပြေမှန်းသိခဲ့တယ်။ နှံ့နှံ့စပ်စပ်မရောက်ခဲ့ပေမယ့် အခုတည်းခဲ့တဲ့
ဟိုတယ်လ်ဈေးရယ် E Bike ရယ် သေချာသိပြီမို့ နောက်တစ်ခေါက် နှံ့နှံ့စပ်စပ် လည်မို့
ဒီတစ်ခေါက် လောကနန္ဒာဘုရားကို အေးဆေးရောက်ခဲ့တာမို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ
E-မြောက်မြောက် says: ပုဂံကို လည်လည် တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးချင်သား
အောင် မိုးသူ says: မြန်မာမှန်လျှင် ပုဂံရောက်ဖူးရမည်။
မြစပဲရိုး says: ပုဂံ ဆိုရင် ဒဏ္ဍာရီ ဘဲ ပြေးပြေး မြင်မိတော့တယ်။ ရောက်ဖူးတယ်။
အောင် မိုးသူ says: စုံအောင် မရောက်သေးဘူး။
alinsett says: ဒီပုံအတိုင်းဆို…. ကျနော်ဖြင့် မြန်မာ မမှန်သေးဘူးပေါ့….
.ဖွေးဖွေးနဲ့ အတူ သွားချင်လိုက်တာ….
အောင် မိုးသူ says: ဖြစ်ရလေ ဒညင်းဝက်ရယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နတ်ပန်းပွင့်တွေ မဝယ်ခဲ့ဘူးလား
အောင် မိုးသူ says: ၀ယ်ခဲ့ဘူး မကြိုက်လို့
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမ ဆို ပြန်မယ့် မနက်မှ ရောက်တယ်..
Ma Ei says: ဒီဖက်ကမ်းနဲ့ ဟိုဖက်ကမ်း ကို ခေါက်တုန့်ပြန်ကူးနေတဲ့လှေကလေးရယ် အုပ်စုလိုက်ပျံသွားနေတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ ထိုင်ကြည့်နေရတာကိုက အရသာရှိနေရော…..